နက္ခတ် ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက် ယခု န၀င်းစက် အကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
၃၆၀ အံသာ (ဒီဂရီ) ရှိသော ရာသီစက်ဝန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ၁၂ စိတ် စိတ်ထားပြီး တရာသိလျှင် (တစ်စိတ်လျှင်) ၃၀ အံသာ (ဒီဂရီ) ရှိသည်ဟု ဝေဒပညာက သတ်မှတ်၍ထားသည်။
'န၀င်း' သည် ထိုအံသာ (၃၀) ရှိသော အစိတ်တစ်ခုကို (၉) စိတ်ထပ်မံ စိတ်ထားခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်၍ လာသည်။ အခြေခံသဘောမှာ နက္ခတ်၊ ပါဒ်တို့အပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
လဂ်သခင်သည် (၁).(၄).(၇).(၁၀) ကိန်းအိမ် နှင့် (၁).(၅).(၉) တြိဂေါဏ များတွင်ရပ်ပေးရမည်။ဥစ်န၀င်း
ကသစ်န၀င်း၊မိတ်န၀င်း စီးကောင်းရမည်။ဒုဌာနသခင်မဖြစ်စေရ။ လဂ်ကာရကဂြိုဟ် တနင်္ဂနွေ ကောင်းသော အနေအထားတွင်ရှိရမည်။
တြိဂေါဏ အနေအထား သုဘဘာဝများကောင်းမွန်မည်။အကြံအစည်နှင့်ကုသိုလ်ကံတရားများ တိုးပွား
၍ကောင်း ကျိုးပေးမည်။ကာရကပြုသော ကြာသာပတေးဂြိုဟ် ကောင်းပါက ပညာ၊သားသမီးဘာဝနှင့်
သီလသမာဓိ ဟူ သောအကျိုးတရားများရရှိကာ ကောင်းသောအခြင်းရာဖြစ်သည်။
ကာရာက ရာဂြိုဟ်တို့သည် မိမိကာရကပြုရာ ဘာဝ ၌မရပ်ကောင်း၊ရပ်လျှင်ထိုဘာဝ
မှတ်ချက်။ ။(၂)တန့်ဘာဝ တွင် ကြာသာပတေးဂြိုဟ် နှင့် (၈)တန့်ဘာဝတွင် စနေဂြိုဟ်
တို့ရပ်လျှင် ကာရကမပျက်ပါ။ ပရာသာရရသေ့(ဖလဒိပိကာကျမ်း)
(၁၂)တန့်ဘာဝတွင်နေသော ဂြိုဟ်တို့သည် မိမိကာရကပြုရာ ဘာဝကိုအားကောင်းစေသည်။ဘာဝများ
ဖခင်အကြောင်း သိလိုလျှင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ကိုလဂ်တတ်ဟောပါ။
မိခင်အကြောင်း သိလိုလျှင်တနင်္လာဂြိုဟ် ကိုလဂ်တတ်ဟောပါ။